Barcelona Oo iska Xaadirisay afar dhamadka Copa Del Rey”Sawirro | afrikada news online
Barcelona Oo iska Xaadirisay afar dhamadka Copa Del Rey”Sawirro
Barcelona ayaa iska xaadirsay afar dhamadka Copa Del Rey kadib markii ay Camp Nou ku xasuuqday kooxda Real Sociedad oo qaab ciyaareed layaableh qaybtii danbe ee kulankan Barcelona cadaadis wayn ku saartay. Kooxda Luis Enrique ayaa wadar ahaan labada kulan ee sidee dhamaadka Real Sociedad ugu soo garaacday 6:2 iyada oo kulankii Camp Nou guul ku gaadhay 5:2. Laakiin Real Sociedad ayaa samaysay dadaal cajiib ah inkasta oo ayna waxba ku helin.
Denis Suarez ayaa kulankan laba gool ka dhaliyay wuxuuna ahaa xidigii goolasha Barcelona daah furay isla markaana soo gabagabeeyay halka Luis Suarez, Lionel Messi iyo Arda Turan ay min hal gool dhaliyeen. Laakiin Lionel Messi ayaa kulankan wacdaro ka dhigay isaga oo si wayn u caawiyay khadka dhexe ee Balaugrana isla markaana door wayn ku lahaa in Barcelona ay u soo baxdo afar dhamaadka Copa Del Rey.
Barcelona ayaa u soo baxday afar dhamaadka Copa Del Rey oo ay labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay ku soo guulaysatay, waxayna kooxda Luis Enrque si fiican uga soo badbaaday imtixaankii Real Sociead oo marti iyo minanba markan ku garaceen. Waxayna ciyaartu ku dhamaatay 5:2 ay Barcelona ku garaacday Real Sociedad.